Yenza ama-big amehlo: iifoto ngeenyawo, ividiyo. Iifake ze-brown brown, eluhlaza, amehlo aluhlaza
Mhle ngumntu onobuchule obunjalo. Kodwa ukuphambukiswa okuncinci kwimigangatho kunika intombazana ithuba elikhethekileyo. Umzekelo omhle wale mehlo amakhulu. Benza ukuba ibhinqa libukeke lingenanto kwaye lithandeka.
Ukwenzela amehlo amakhulu: ubuchule bokwenza kunye neengcomo zabaculi bokuzenzela
Yenza iifowuni zamehlo amakhulu kakhulu lula kunokuba encinci okanye incinci. Unokugqoka ukwakheka kwendalo yonke, landela imithetho emithathu:
Khetha i-shades matte shades
Ukugatya ngokupheleleyo ukukhanya
Ungasebenzisi ubuqhophololo obuqaqambileyo
Amehlo amakhulu anokuba neephene ezincinane zefom:
Ekude okanye kufuphi nebhuloho yempumlo
Kule meko kuyimfuneko ukulungisa iimpazamo zezilwanyana ngoncedo lwezimonyo.
Iingcebiso zokubumba kwamehlo enamandla
Ubungakanani bamehlo amakhulu amakhulu kufuneka kube yimimandla emnyama. Kubalulekile ukugubungela yonke ijwabu leso, kodwa ngokukhethekileyo, kuyimfuneko ukusebenzisa izithunzi kwiziko. Ngaloo ndlela, kubonakala ngathi "sinqumle" i-bulge, okwenza ukuba amehlo "ahlale ephahleni."
Jonga isithomo ngokuphunyezwa ngokunyathelo ngamanyathelo okwenza iimfono ezinkulu. Ubumnyama bube yindawo ephakamileyo yeentloko zeenkophe, njengokuba umthetho ungaphakathi. Emva kwesicelo, umthunzi we-shade ukuya kwiinki.
Iingcebiso zokubumba kwamehlo azungezile
Ukuba unayo amehlo ajikelezileyo, ngoko unako ukuwukhupha nge uncedo lweedolothi ezichanekileyo. Utolo kufuneka luqalise ngomgca we-thinnest kwaye ukhule ngokukhawuleza kwi-eyeriyeli yangaphandle, ayikwazi ukupheliswa ngokukhawuleza, umsila wentoloko kufuneka ube mncinci ukuya ekupheleni.
Iingcebiso zokwenza ama-far and near-planted plant
Amehlo asekude aqondiswa ngolu hlobo oluthile olugqithiseleyo iso. Ikhoneni langaphakathi lenziwe linyanyiswe kwaye "libekwe" kufuphi nebhuloho yempumlo. Sebenzisa ngokucacileyo izithunzi ezikwindawo yokuxhamla kwi-septum yangasese.
Amehlo avaliweyo, ngokuchaseneyo, akudingeki ukuba kucaciswe ngokucacileyo (ingakumbi kwikona elingaphakathi kweso). Unokwenza intambo, kodwa kuphela kwiminyaka engaphandle, uze uyithube. Kwibhulorho yepumlo, sikhanyisa ithoni yesikhumba, kwaye kwimiba engaphandle yamehlo sisebenzisa izithunzi ezimnyama, siwafake kwiitempile.
Yenzele amehlo amakhulu amakhulu
Ngokuqhelekileyo senza i-brown eyes eyes shades. Kubukeka buqhelekile kwaye bendalo. Awudingi ukuvuselela ivili - umdaka uhambelana ngokugqithiseleyo nomninzi. Ukwenza okunjalo kunokuba ngumsebenzi ococekileyo kwi-ofisi yansuku zonke.
Kodwa ukuba ufuna ukwahlukana nomfanekiso oqhelekileyo, qwa lasela ezi zilandelayo:
Bakugxininisa umbala ocebileyo we-iris kweso lakho, jonga ukujonga kwaye uphinde uvuselele i-makeup yakho yonke. Okunye oku kuxelele u-Yuri Stolyarov, umculi oqeshwe ngokusemthethweni we-Maybelline New York kule vidiyo.
Iifake zamehlo amakhulu aluhlaza
Ukudala amantombazana enamehlo aluhlaza kufuneka asebenzise umbala obomvu (kufuphi nomthunzi obomvu), igolide, ithusi, i-burgundy, i-purple.
Funda kabanzi malunga nendlela yokwenza iimpepha zamehlo amakhulu aluhlaza kwisifundo sevidiyo.
Iphayilethi yombala engasetyenziselwa ukwenza ukwakheka kwamehlo amakhulu aluhlaza okwesibhakabhaka kakhulu. Eyona nto - imibala efudumeleyo: i-orange, imdaka, i-creamy, i-pinki, i-peach. Kubanda kubonakala kubhedu obumangalisayo kunye nayo yonke imibala eluhlaza okwesibhakabhaka.
Qaphela: ngezithunzi ezimnyama ezifunekayo ukuba uqaphele kakhulu. Ngama-makeup ayiphumelelanga, aya kudala umphumo wamehlo anonkqenkqeza.
I-Masterclass ekwakheni ukuzenzela kwamehlo aluhlaza kubona kule vidiyo.
Indlela yokubeka izithunzi ezamehlo
Ingxenye yesithathu ingabonakaliyo okanye indlela yokwenza ukhetho
Izindlela ezine zokuhle kwaye zibophe ngesibhakabhaka ebusika
Unonophelo lwezakhono zoboya beentloko
Umsoco ococekileyo wekhukhi
Ziziphi izinto ezincinci ezinokuthi zifanele zibe endlwini yethu?
Isaladi kunye neembotyi ebusika
Umhlaza womhlaza, iimpawu
Cannelloni kunye nenyama